宇都宮氏 の写真・画像 : 報道写真の共同通信イメージリンク
「宇都宮氏」の写真・映像 ｜ 「宇都宮氏」の写真・映像 ｜
Kenji Utsunomiya Campaigns for Tokyo Gubernatorial Election
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya campaigns outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Renho (R) wearing a face shield delivers a speech to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (L) during a campaign event outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Renho wearing a face shield delivers a speech to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (L) during a campaign event outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Renho (C-R) wearing a face shield delivers a speech to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (C-L) during a campaign event outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Akira Koike (R) delivers a speech to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (L) during a campaign event outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Akira Koike (R) delivers a speech to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (C) during a campaign event outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: A member of staff shows a face mask use notice to prevent the new coronavirus spread during a campaign event for the Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: A member of staff shows a social distancing notice to prevent the new coronavirus spread during a campaign event for the Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Renho wearing a face shield attends a campaign event to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: People wearing face masks listen to Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya‘s speech during a campaign event outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (R) campaigns outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Japanese politician Akira Koike attends a campaign event to support Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya (C) campaigns outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ
June 26, 2020, Tokyo, Japan: Tokyo Gubernatorial Candidate Kenji Utsunomiya greets voters outside Akabane Station. Utsunomiya a former president of the Japan Federation of Bar Association and is running to become the next Tokyo governor. Japanese politicians Akira Koike and Renho came to support Utsunomiya‘s campaign. The gubernatorial election will be held on July 5. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire)、クレジット：©Ｒｏｄｒｉｇｏ　Ｒｅｙｅｓ　Ｍａｒｉｎ／ＺＵＭＡ　Ｗｉｒｅ／共同通信イメージズ